→ Khuphela i-WhatsApp yasimahla ye-iPhone, i-iPad, iMac okanye iPC | IPhone iindaba
Khuphela i-WhatsApp mahala Kulula kakhulu, kuba okwangoku, isicelo simahla kuwo onke amaqonga. Esona sizathu siphambili sokuphumelela kwayo, kunye nokubanakho ukubakho kumakhulu ezigidi zezixhobo kwihlabathi liphela. Yiyo loo nto sifuna ukukunika isandla sokwazi ukuba kanjani faka i-WhatsApp mahala Ngendlela elula, enkosi kwizifundo zethu ezizinikeleyo. Ke ngoko, thatha ithuba kwiimenyu zethu kunye namacandelo ahlukeneyo ukuze ufumane isifundo osifunayo, siya kukubonelela ngalo lonke ulwazi onokulufuna ukuze ungaphoswa linyathelo elinye kulo lonke ufakelo.
Ukongeza, i-WhatsApp ine-legion ebalulekileyo yeenjineli ngasemva kwayo, kodwa hayi ngokusemthethweni kuphela, kodwa nangokungekho semthethweni, ngenxa yoko iinguqulelo eziguqulweyo ze-WhatsApp azinakuphoswa, nto leyo yaziwa njengeyona idumileyo I-whatsapp kunye, isicelo se-WhatsApp esivumela ukuba sifumane okuninzi kuyo, kuba ibandakanya imisebenzi emnandi engenasicelo sokuqala, yiyo loo nto siza kukunceda ukhuphele i-WhatsApp Plus simahla ngokulula kwisixhobo sakho, iinguqulelo zamva nje Uhlengahlengiso oludume kakhulu kumxhasi wemiyalezo odumileyo kwindalo yezobuchwepheshe.
1 Yonwabela i-WhatsApp kuso nasiphi na isixhobo
2 Faka iWhatsApp kwiPC
3 Yintoni uWhatsapp?
4 Ungahlala uhlaziya i-WhatsApp
5 Inkqubo ye-WhatsApp encryption
6 I-WhatsApp ibutshintshile ubomi bethu
6.1 Enye indlela eya kuWhatsApp
7 Yazi i-WhatsApp Plus kunye nokwahluka kwayo
8 I-WhatsApp kwamanye amazwe
9 Izinto ongazaziyo malunga noWhatsApp
Yonwabela i-WhatsApp kuso nasiphi na isixhobo
Kwimeko I-WhatsApp ye-iPhone ikhethekile. Iqonga leApple lelo lazala uWhatsApp njengomthengi wemiyalezo, yafika ngo2010 kwiVenkile yeApp ye-iOS ngexabiso le- € 0,99, kwaye oku kukuqinisekisile ngenkonzo yobomi, oko kukuthi, awunasidingo sokuhlaziya i-WhatsApp isimahla, kodwa i-WhatsApp ihlala isebenza emva kokuthenga okokuqala. Emva kwexesha i-WhatsApp yakhululeka yabuya ngo-2013, nangona kunjalo, yaba yinkonzo yonyaka yobhaliso, yabiza i- € 0,99 yonyaka wenkonzo. Into ethi emva kokufunyanwa kwe-Facebook isuswe ngokupheleleyo, ngoku ukukhuphela i-WhatsApp simahla kunokwenzeka ngokupheleleyo, nangonaphakade.
I-WhatsApp ngokucacileyo yasungulwa kwiBlackberry Kwakhona, ngaphandle kwento yokuba namhlanje yinkqubo eyekiweyo ngenxa yokunyamalala kwenkampani, i-WhatsApp iyaqhubeka nokusebenza ngokupheleleyo kwaye isimahla kule nkqubo yokusebenza. Nangona yayine-BBPin njengembangi enkulu kule meko, i-WhatsApp iphinde ikwazile ukulawula inkqubo ngokuthanda, kwaye uninzi lwabasebenzisi lukhetha ukukhetha owona myalezo uthandwa kakhulu kwimarike, asibasoli. IBlackBerry iyilelwe ngokuchanekileyo loo nto, iibhodi zayo ezibonakalayo zibonelela ngesantya sokuchwetheza kunye nokulula ezinye izixhobo ezingafikeleli kuzo.
Ayinakuphulukana nayo I-WhatsApp kwi-Android, yeyona nkqubo iphambili yokusebenza kwintengiso, ilawula malunga ne-70% yezixhobo eziphathwayo kwihlabathi jikelele, ke i-WhatsApp yomelele kwi-Android kunayo nayiphi na inkqubo yokusebenza. Eli qonga laba lelokuqala apho Khuphela i-WhatsApp yasimahla Kwakunokwenzeka kwakhona ukuvuselela ukubhaliswa kwesicelo akuzange kube nzima kakhulu kwi-Android, kuba njengoko iintsuku zihamba ngokufikelela kwakhona kwenziwa kwakhona kwaye ukuhlaziywa konyaka omnye kwavela ngaphandle. Khuphela i-WhatsApp ye-Android Kulula njengokuya kwiVenkile yeGoogle Play kunye nokukhangela phakathi kwezona zicelo zikhutshelweyo, kuhlala kunjalo kwaye kuya kuhlala kuphakathi kwezokuqala.
Kuyafana nakwiipilisi, khuphela i-WhatsApp kwithebhulethi Inokwenzeka ngokupheleleyo, kwaye sifumana ezinye iindlela, ngakumbi xa isixhobo ekuthethwa ngaso siqhuba inkqubo yokusebenza ye-Android. Sinethuba lokuyifaka usebenzisa i-SIM khadi kwithebhulethi ngokwayo, okanye sisebenzise naliphi na elinye ikhadi leSIM elikwiselfowuni. Ukongeza, uguqulelo lweWebhu yeWhatsApp lunokusetyenziswa kumacwecwe kusetyenziswa imo yedesktop kwibhrawuza esiyithandayo, ke siyakuba nohlobo lweWhatsApp kwithebhulethi ngaphandle komzamo omkhulu.
Nangona kunjalo, iipilisi ezithandwa kakhulu ngokuchanekileyo yi-iPad. Kule meko, faka i-WhatsApp Ngokwendalo, oko kukuthi, njengesicelo, kunzima kakhulu, kwaye sinokwenza le ntshukumo sisebenzisa isixhobo esinjengeJailbreak, nangona kunjalo, njengamacwecwe e-Android, kunokwenzeka ukuba usebenzise inkonzo yeWhatsApp yeWebhu ngokulula kwaye ifikeleleke kuso nasiphi na isikhangeli kwi-iPad yethu, ukuze sikwazi ukusebenzisa I-WhatsApp yasimahla kwi-iPad Ngaphandle komgudu omninzi, kuya kufuneka singene kwinkonzo yeWhatsApp yeWebhu kwisikhangeli seSafari uqobo kwaye ukhethe imo yenguqulo yedesktop.
Faka iWhatsApp kwiPC
Ngomhla ka-Meyi ka-2016, sasineendaba zokuba u-WhatsApp ekugqibeleni wagqiba kwelokuba aqalise ingxelo ka I-WhatsApp yeMacKe, sinokukhuphela usetyenziso lweWhatsApp ngokuthe ngqo kwi-Mac yethu ngokukhawuleza kwaye sincokole nabo bonke abafowunelwa bethu ngayo yonke intuthuzelo yebhodi yezitshixo kunye nekhusi lekhompyuter yethu, nokuba ilaptop efana neMacBook okanye idesktop enjengeMac, into ebalulekileyo Kukuba sinokunxibelelana nabahlobo bethu kunye nabantu esibathandayo ngenxa yesicelo se I-WhatsApp yeMac.
Kodwa ayisiyiyo yonke into ehlala apha, kwaye kukusetyenziswa kwe I-whatsapp ye-pc yafika ngaxeshanye. Nayiphi na ikhompyuter esebenza ngenkqubo yeWindows 8, Windows 8.1 okanye Windows 10, inokukhuphela i-WhatsApp yePC kwaye uyiqhube ngokwendalo njengalo naluphi na olunye usetyenziso. Inqaku elibi kuphela kukuba ilula iklayenti yeWhatsApp yeWebhu, kwaye ayisosicelo esahlukileyo. Nangona kunjalo, asinakuthetha kuphela nabo bonke abafowunelwa bethu njengohlobo lweWhatsApp ye-iPhone kunye neWhatsApp ye-Android, kodwa sinokuthumela amaxwebhu kubafowunelwa bethu, kwaye ke, sabelana ngeefoto esinazo kwiPC yethu.
I-WhatsApp sesona sicelo sithandwayo sithumela imiyalezo kumaxesha akutshanje. Ayisiyo kuphela esona sicelo sisetyenzisiweyo kwii-smartphones ezininzi kwihlabathi liphela, kodwa ikwanjalo itshintshile indlela esithetha ngayo nabantu bonke, esi sicelo senziwe lula ukuba kube lula ukuthumela imiyalezo kubafowunelwa bethu. Ngapha koko, sinokude siqwalasele ukuba indlela esithetha ngayo nabantu esibathandayo itshintshile, iguqukile ngokuhamba kwexesha, kodwa eyona nto ihlala injalo, thumela imiyalezo ngokukhawuleza.
Ifanele ukonga okubonakalayo kwimithetho yabantu, kuba ngetekhnoloji ekhulayo ye-3G uninzi lwezicelo zaqala ukwanda, nangona kunjalo, akukho nanye yayixubeke kangaka., kulula ukuyisebenzisa kwaye iyakhawuleza njenge-WhatsApp. Kungenxa yoko le nto, bakrola umngxunya ngokukhawuleza endaweni ye-BlackBerry PIN. Kwakulula ukuthumela imiyalezo engapheliyo kunye nengenamkhawulo ngexesha lokwenyani, ukongeza, kungekudala emva kokuba kuvunyelwe ukwenza amaqela abafowunelwa kwingxoxo enye, kunye nomsebenzi wokuthumela iifoto, ukuphakamisa i-WhatsApp phezulu kuyo yonke ingeniso uluhlu kunye nempumelelo, nokuba leliphi iqonga.
Isicelo sokuqala safika kwiVenkile yeApp ye-iOS ngoJanuwari 2010, ke, okwangoku isicelo singaphezulu nje kweminyaka emithandathu ubudala. Kodwa ngokuhamba kwexesha ifumene ukungqinelana kwe-Android, iBlackBerry, iFowuni yeWindows, iSymbian kunye ne-S40 Series. Uninzi lwezi nkqubo zokusebenza luye lwanyamalala ngelixa i-WhatsApp iqhubekile nokubamba phezulu. Kungenxa yoko le nto singayithandabuziyo impumelelo yayo, I-WhatsApp iliguqule ilizwe lomyalezo njengoko sisazi.
Igama lesicelo livela kwintetho yesiNgesi "Yintoni ephezulu?", imibuliso efudumeleyo kulutsha. Ngayo yonke into nangayo loo nto, ihlala ihleli ingapheliyo ibe ilogo yayo eluhlaza, ibhaluni yomyalezo equlathe umnxeba ngaphakathi, elula kodwa ethe ngqo, uphawu olwamkelwe kwilizwe liphela, njengoko inokuba yiyo nayiphi na into elungileyo, kwaye nguWhatsApp ngu Inxalenye yobomi bemihla ngemihla bamakhulu ezigidi zabantu kwihlabathi liphela, njengawe, osifundayo. Kungenxa yoko le nto ufikile kweli phepha, kuba sifuna ukukufundisa yonke into malunga nesicelo esimnandi, ukuze ufumane okuninzi kuso kwaye ukonwabele ukuncokola kunye nesakho. Ngaba ubusazi ukuba sele kukho abantu abasokolayo Umlutha kaWhatsApp?
Ungahlala uhlaziya i-WhatsApp
Ukuhlaziya i-WhatsApp kulula, nokuba yeyiphi iqonga lakho, kuya kufuneka uye kwiVenkile yeApp ye-iOS kwaye ujonge kuhlaziyo ukuze wazi ukuba lixesha okanye hayi hlaziya WhatsApp. Olunye uhlaziyo olukhethiweyo lweWhatsApp ye-iOS yinto ebizwa ngokuba yi "bug fixes", edla ngokuphucula ukusebenza kwesicelo, kodwa ifihla iindaba ezininzi eziza kuvela kungekudala. Kwelinye icala, kwimeko ye-Android, umsebenzi uyafana, kuya kufuneka siye kwiVenkile yeGoogle Play, kwaye nje ukuba singene, iya kusazisa ngezicelo ezifuna uhlaziyo.
Inkqubo ye-WhatsApp encryption
Ngenxa yokukhula kweemfuno zokhuseleko ekuhambeni kwexesha, i-WhatsApp igqibe ekuqaleni kuka-2016 ukubandakanya inkqubo yokubethela umyalezo. Xa kunokwenzeka, iminxeba kunye nemiyalezo ethunyelweyo ibhalwe ngokufihlakeleyo okokugqibela, oko kuthetha ukuba uWhatsApp nabantu besithathu abakwazi ukumamela okanye ukufunda. Isaziso esincinci sokhuseleko siya kuboniswa ngalo lonke ixesha siqala incoko kunye nomsebenzisi omtsha ukusazisa oko lonke unxibelelwano lwethu lukhuselekile kwaye lufihliwe, I-WhatsApp ibheje kakhulu kukhuseleko nakubucala, kwaye ayisiyonto esinokuyidela, namhlanje kubaluleke kakhulu ukugcina idatha yethu ikhuselekile.
I-WhatsApp ibutshintshile ubomi bethu
Ngokwezifundo zamva nje, Ama-53% abantu baseSpain baxoxa phakathi kwe-5 kunye ne-50 ye-WhatsApp ngemini, kwaye ayisiyonto isothusayo le, ngakumbi nangakumbi kuthi sisebenzisa esi sicelo njengeyona ndlela iphambili yokunxibelelana, inani elikhulu labasebenzisi kwihlabathi liphela linika ukholo oluqinisekileyo kuyo. Okwangoku, iipesenti ezingama-90 zabasebenzisi bakaWhatsApp ngabasebenzisi abasebenzayo, Oko kukuthi, basebenzisa inkonzo ngaphezulu kwesinye ngosuku, ukuyenza ibe yeyona ndlela yokunxibelelana yokwenyani kunye neyona nto iphambili. Esona sicelo sokusetyenziswa kwemiyalezo ekhawulezileyo esine-98,1% yabo bonke abasebenzisi, ngaphezulu kokhuphiswano olunje ngeTelegram, iSkype okanye u-Facebook Messenger.
NgoFebruwari 2016, I-WhatsApp yaphule umqobo wabasebenzisi abaliwaka lezigidiInkonzo yemiyalezo idlula ababhalisile kwi-Facebook Messenger ngezigidi ezingama-200, umzekelo. Ngokwezibalo zamva nje, iiseva zikaWhatsApp ziphatha imiyalezo emalunga nezigidi ezingama-42.000 kunye neevidiyo ezingaphezu kwezigidi ezingama-250 ngosuku, umthwalo obalulekileyo, obonisa ukuthandwa kwalo myalezo wabathengi kunye nendlela etshintsha ngayo imo apho sithetha nokunxibelelana nabahlobo. , abantu esibathandayo nabo bonke abantu abakungqongileyo.
Enye indlela eya kuWhatsApp
Nangona kunjalo, ngaphandle kwezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela, zikhona iimarike ezichasayo, njenge China, apho bathanda khona WeChat, EMzantsi Korea, apho i-Kakao Talk ilawula khona, okanye iJapan, apho umgca Iyaqhubeka nokugcina isikhundla sayo esiphambili. Nangona kunjalo, nesibakala sokuba isicelo sikhululekile kubomi bonke kunye nokuqaliswa kweWebhu yeWhatsApp, ngakumbi nangakumbi bayajoyina.
Yazi i-WhatsApp Plus kunye nokwahluka kwayo
Nangona azifumaneki nge-iOS (ngaphandle kokuba une-jailbreak), ezininzi Uhlengahlengiso kuWhatsApp Plus zenziwe ngabaphuhlisi abohlukeneyo. Umzekelo, I-WhatsApp kunye neHolo, eyayiyinguqulelo yeWhatsApp Plus eyavumela ukuba kusetyenziswe ujongano lweHolo kwezo zixhobo ze-Android ezazingekahlaziywa. Le nguqulo yeHolo yapheliswa ukuphela konyaka ophelileyo ngenxa yokuba uninzi lwezixhobo ze-Android sele zinombonakalo okhankanywe ngaphambili. Nangona kunjalo, eminye imithombo ivelile, njenge I-WhatsApp kunye neeJimods, Uguqulo lweWhatsApp olusekwe kolunye longezo lwamva nje, olwenza ukuba lube lolunye lweenguqulelo ezizinzileyo esinokuzifumana kumnatha.
Kule ndawo uza kufumana lonke ulwazi oluyimfuneko, lonke uhlengahlengiso kuWhatsApp, iinguqulelo zokuqala, kunye nezifundo ezilula nezifikelelekayo ukuze wenze olona lukhulu Free whatsapp. Kubalulekile ukuba sisazi ngokunzulu isicelo esisetyenziswa ngokubanzi njengeWhatsApp, kwaye ngaphezulu kwako konke esikwaziyo ukusikelwa umda, amaxabiso kunye nokufumaneka kwayo. Ukusetyenziswa kwezi mpawu kunokuba likrele elintlangothi-mbini kuxhomekeke ekubeni yeyiphi imeko, ke siyigcina ngononophelo kunye nobuchwephesha obuninzi.
I-WhatsApp kwamanye amazwe
Indlela i-WhatsApp eyaphule ngayo imida yejografi kufanelekile ukuba ikhankanywe, umbuzo uyavela wokuba ingaba Ndingasebenzisa i-WhatsApp ngaphandle kwelizwe lam, kwaye impendulo ngu-ewe ngokuqinisekileyo. I-WhatsApp izakusebenzela mahala naphi na okanye isixhobo esenziwe sasebenza ngaphambili kwaye sinodibaniso lwe-intanethi, nokuba yi-3G okanye iWiFi. Ukongeza, asizukuphulukana nomsebenzisi ngaphandle kokuba sikhuphe usetyenziso, ke i-WhatsApp kulula ukuyisebenzisa nakweliphi na ilizwe, sinokuqhubeka nokugcina unxibelelwano nabantu esibathandayo naphina apho sikhona, sifuna kuphela uqhagamshelo lwe-intanethi.
Enye into elungileyo yeWhatsApp, kukuba sinako Sebenzisa iakhawunti yethu efanayo kaWhatsApp nokuba leliphi na ikhadi esikwazisileyo. Oko kukuthi, ukuba, umzekelo, sisebenzise i-WhatsApp yethu ngekhadi lesizwe, kodwa siza kuhamba siye kwelinye ilizwe kwaye sikhetha ukuhlawula iirhafu zedatha ezikhoyo kwilizwe esiya kulo, kufuneka silifake kuphela ikhadi kwaye siqhubeke nokonwaba , kuba abafowunelwa bethu banokuqhubeka bencokola nathi ngenombolo yethu yangaphambili enxulunyaniswe noWhatsApp, indlela elungileyo yokuqhubeka nokuthetha nabahlobo bethu xa sihlala phesheya, nangona sinenye inombolo yefowuni apho ukuze sisebenzise amaxabiso esizwe.
Izinto ongazaziyo malunga noWhatsApp
I-WhatsApp yazalwa ngo-2009. Emuva ngo-2014, i-WhatsApp yafunyanwa ngu-Facebook ngokutshintshela i-19.000 yezigidi zeedola, mhlawumbi ungazi ukuba yintoni igama labenzi beWhatsApp, UJan Koum noBrian Acton, bashiye i-Yahoo ngo-2009 kwaye banikezela ngeenkonzo zabo kuFacebook nakuTwitter, zombini iinkampani bazala, kwaye abazi ukuba bazisola kangakanani, kwaye loo nto kukuba iFacebook ngeyigcine iibhiliyoni zeedola ukuba bebeqeshe. kubo. Ukungaqeshi kubakhonze abadali ngokumangalisayo, abaye baba zizigidi ngeyona ndlela inobugorha.
Enye into onokungayazi yile I-WhatsApp ayikaze ichithe nepeni enye kwintengiso, inkampani ayikaze ibeke intengiso naphina ukukhuthaza usetyenziso lwayo, impumelelo yayililizwi lomlomo. Ukongeza, yenza ukuba abasebenzisi baphulukane nemali eninzi, okokuqala ngokususa iSMS kwaye ngoku ukongeza nokubanakho ukwenza umnxeba weVOIP ngeWhatsApp. Nangona kunjalo, iifowuni zevidiyo zikwindlela eya kuWhatsApp, nto leyo enokuthi ithethe enye into enomdla kwindlela esinxibelelana ngayo, i-WhatsApp itshintsha yonke into eyichukumisayo, kwaye lelo ligidi labasebenzisi bayo eliza kuyilandela apho ndiya khona.
Siyathemba ukuba uza kufumana nantoni na oyikhangelayo ubhaka Apha, sinayo yonke into oyifunayo enxulumene nesona sicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko kwintengiso. Ukuba uyafuna khuphela whatsapp mahala, Apha uya kufumana yonke into oyifunayo.